Torolàlana ho an'ny mpanatrika - Expo an'ny varotra iraisam-pirenena any Florida
Eto ambany ianao dia hahita fampahalalana mahasoa izay hamaly ireo fanontaniana mety anananao momba ny Florida International Trade Expo.
Daty sy ora fampirantiana
Inona ny datin'ny Expo Florida International Trade Expo?
Ny Expo an'ny varotra iraisam-pirenena any Florida dia hatao ny talata 16 martsa 2021 ka hatramin'ny alakamisy 18 martsa 2021.
Inona ny ora fisehoan-javatra?
Ny ora ora dia amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 6:00 hariva ny ora atsinanana (ET).
Ho azo idirana ny sehatra virtoaly aorian'ny ora fisehosehoana handraisana ireo mpitsidika amin'ny faritra samihafa. Azonao atao ny mitsidika trano rantsan-kazo sy mangataka fihaonana amin'ireo mpampiranty mandritra io fotoana io.
Ahoana no fomba hidirako?
Mandehana any amin'ny https://expo.floridaexpo.com/login
Ampidiro ny adiresy mailaka nosoratanao.
Ampidiro ny teny miafinao. Izany dia napetraka nandritra ny fizotry ny fisoratana anarana.
Tsindrio "Log In"
Ahoana no hamerenako ny teny miafiko amin'ny lampihazo?
Raha tsy mahatadidy ny tenimiafinao ianao dia tsindrio ny rohy "hadino ny tenimiafiko" hita eo amin'ny pejy fidirana.
Na mankanesa any https://expo.floridaexpo.com/forgotpassword. Ny rohy tenimiafina hadino dia hangataka ny adiresy mailakao ary handefa mailaka misy rohy famerenana ny teny miafina.
Ahoana raha mila misoratra anarana amin'ny tenako na mpiara-miasa amin'ity hetsika ity aho?
Visit https://www.floridaexpo.com/ hisoratra anarana amin'ny fotoana rehetra! Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny mpitsidika hatramin'ny alakamisy 18 martsa amin'ny 12 ora hariva ET.
Vonjeo! Mila fanampiana ara-teknika aho.
Alefaso azafady support@nextechar.com ho an'ny fanampiana olana amin'ny famahana olana amin'ny tranokala toy ny buffering video, famerenana ny teny miafina, na fitetezana tranokala ankapobeny. Ho an'ny fanohanana ny hetsika ankapobeny dia mifandraisa floridaexpo@enterpriseflorida.com.
Handray fanamafisana ve aho rehefa misoratra anarana?
Rehefa misoratra anarana amin'ny fomba mahomby amin'ny Expo, ireo mpandray anjara dia alefa amin'ny pejy "Misaotra" ary hanana fidirana eo noho eo amin'ny sehatra virtoaly ankehitriny. Handefa mailaka fisaorana miaraka amin'ny fifandraisana hafa isan-kerinandro alohan'ny Expo aorian'ny fisoratana anarana.
Fitetezana ny lampihazo mandritra ny hetsika (Misy 16 - 18 martsa 2021)
Ahoana no hifandraisako amin'ireo mpampiranty?
Miankina amin'ny mpampiranty no ahitanao safidy maromaro hifaneraserana. Raha hitsidika trano rantsan-kazo iray dia safidio ny Exhibit Grand Hall avy eo amin'ny fitetezana ankavia ary kitiho ny booth tianao jerena. Mariho ireo horonan-tsary miaraka amina feon-kira anglisy miaraka amina fiteny enina: arabo, sinoa, frantsay, alemanina, portogey ary espaniola.
Ahoana no ahafahako mahita mpampiranty mahaliana ahy haingana?
Isaky ny Efitrano fampiratiana lehibe dia azonao atao ny mikaroka amin'ny anaran'ny orinasa, indostria ary / na teny lakile.
Afaka miresaka mivantana amin'ireo mpampiranty anjara ve aho?
Ie. Isaky ny efitrano fandraisana anjara dia hisy fisehoan-javatra amin'ny chat room ahafahanao mifandray. Ankoatry ny boaty chat sy ny fijerena horonantsary, ireto misy fomba ahafahanao mifandray mivantana amin'ny solontenan'ny fampiratiana tsirairay:
INFO - Mamaky famaritana orinasa.
CONTACT - Jereo sy sintomy ny mombamomba ny karatra fifandraisana.
LIVEMEETING - Mitsambikina mivantana amin'ny fivoriana video mivantana miaraka amin'ny solontenan'ny orinasa iray.
CALENDAR - Manorata fotoana fanendrena iray miaraka amin'ny solontenan'ny orinasa.
RESOURCES - Hahafantatra bebe kokoa momba ny serivisy sy ny tolotra omen'ny orinasa.
TETO AHO! - Ampahafantaro ny mpampiranty fa teo amin'ny boosin'izy ireo ianao. Misy tranoheva sasany aza manome loka raffle fanampiny amin'ny fanaovana izany!
Voasoratra ve ny fampisehoana webinar ary ho afaka hiditra amin'izany ve aho avy eo?
Ie. Mandritra ny 30 andro eo ho eo aorian'ny hetsika dia azonao atao ny miditra amin'ilay tranokala ary mijery horonan-tsary takiana, mitsidika tranobongo fampirantiana, fitaovana fampidinana ary maro hafa.
Azoko atao ve ny mametraka fanontaniana amin'ireo mpandahateny mandritra ny fampisehoana webinar?
Mamporisika anao izahay hametraka fanontaniana mandritra ny fampisehoana. Hisy ny Bar Fanontaniana izay hita ao ambanin'ny efijery. Ny fanontaniana (mamela fotoana) dia hovaliana mandritra ny Q&A natokana amin'ny farany.
Azoko atao ve ny mandamina fihaonana amin'ny orinasa efa voalamina mialoha?
Eny, mamporisika anao izahay hifanerasera amin'ireo mpanentana ary hangataka fivoriana iray miaraka amin'izy ireo amin'ny adihevitra manokana. Raha handamina fivoriana iray-iray dia tsindrio ny kisary Kalandrie ao amin'ny bara manga eo ambanin'ny trano fisakafoanana tsirairay ary araho ny torolalana omena ao. Ny safidy handaminana fivoriana dia ho hita eo anelanelan'ny 16 - 18 martsa 2021.
Azoko atao ve ny misintona ny mombamomba ny fampirantiana sy ny fitaovana fampiroboroboana?
Eny, azonao atao ny misintona ny rakitra rehetra sy ny karatra e-raharaham-barotra tadiavinao ary tehirizinao ao amin'ny fitaovanao.
Mandra-pahoviana aho no afaka miditra amin'ilay sehatra hetsika?
Hanana fidirana amin'ny lampihazo sy atiny OnDemand hatramin'ny 30 andro aorian'ny hetsika ianao. Azo idirana ny sehatra virtoaly aorian'ny ora fisehosehoana handraisana ireo mpitsidika amin'ny faritra samihafa. Azonao atao ny mitsidika trano rantsan-kazo sy mangataka fihaonana amin'ireo mpampiranty mandritra io fotoana io.
Manentana anao izahay hitsidika ny efitrano fanaovan-gazety hijerena ireo fanambarana an-gazety avy amin'ireo orinasa mampiseho ny vokatra sy serivisy farany.